Ny fiovam-po, fiverenana ilalana
“Lavo tamin’ny tany izy ka nandre feo nanao taminy hoe: Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika Ahy? Ary hoy izy : Iza moa ianao, Tompoko? Dia hoy Izy: Izaho no Jesosy Izay enjehinao.” Asan’ny Apostoly 9:4-5
“Izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona; koa miverena amiko, fa efa nanavotra anao Aho.” Isaia 44:22
Saoly avy any Tarsosy dia olona nanam-pahaizana tamin’ny taonjato voalohany taorianan’i Jesosy Kristy. Tsy nanangonana fahalalana midadasika momba ny soratra mahakasika fivavahana fotsiny anefa izy. Olona tsy tia mipetra-potsiny izy, “mpitolona”. Mba hanompoana an’Andriamanitra, dia tiany hotehirizina madio ny fivavahana jiosy, ary nihevitra izy fa tokony hanenjika ny kristiana.
Indray andro anefa, raha nandeha hankany Damaskosy izy, dia nifanena tamin’i Jesosy, ka nitsimbadika ny fiainany. Voakapoka mafy izy, ka nahatsapa fa nanohitra an’Andriamanitra. Ary indrindra, takany fa io Jesosy notsiratsirainy sy notoheriny io dia tena Ilay Mesia, Ilay Zanak’Andriamanitra nitsangana tamin’ny maty. Koa dia niverina ilalana tanteraka izy. Niova fo izy, ka nanjary Paoly apostoly. Tsy nisy dikany taminy intsony izay nokatsahiny tamin’ny lasa. Ary izany, hoy izy, dia “noho ny fihoaran’ny hatsaran’ny fahalalana an’i Kristy Jesosy Tompoko” (Filipiana 3:8) -Ilay nataony tsinontsinona.
Nandritra ny taonjato nifandimby, dia olona an-tapitrisany no nitodika tamin’i Jesosy Kristy, mba handray famelan-keloka sy fiainam-panahy vaovao. Ny fiovam-po dia tsy voatery hahagaga tahaka ny an’i Paoly, kanefa trangan-javatra iankinan’aina, ho an’ny olona iray. Ny mampiavaka azy dia hoe miova tanteraka ny zavatra mahaliana sy ny fitondrantena. Tsy mitady izay hialany tsiny ny kristiana, fa miaiky ny fahadisoany eo anatrehan’Andriamanitra, ka mandray ny famelan-keloka avy aminy. Miaraka amin’izany izy dia miezaka hanonitra ny ratsy nataony tamin’ny hafa. Ny fiovam-po marina dia tsy teny fotsiny, fa fihavaozana lalina ao amin’ny tena manontolo. Efa nataonao ve izany dingana izany?